April 2012 – Everybody Read TChen
Posted on April 26, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး2 Comments on ယောက်ျားတွေ ရဲ့ ပြိုင်ပွဲ
Posted on April 20, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး5 Comments on ရှုပ်ထွေးတဲ့ အချစ်
ကျမ လက်ထဲက အဲ့ဒီ “နို့ တိုက်သတ္တဝါတွေအကြောင်းသိကောင်းစရာ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဟုိုလှန်ဒီလှန် လုပ်နေမိ တယ်။ တနေရာမှာတော့ ဝက်ဝံတွေအကြောင်းပြောထားတာတွေ့လို့ ကောက်ဘတ်ကြည့်တော့….အေရှိယတစ် ဝက်ဝံ မည်းတွေက (သူတို့ကို တိဘက်က လဝက်ဝံလို့လဲခေါ်ကြပါသတဲ့) လူတွေ နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေရတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်တဲ့။ လူနဲ့ တွေ့နိုင်မယ့် နေရာတွေ မှာ နီးနီးကပ်ကပ် နေလေ့ရှိကြပါသတဲ့။ ဝံညိုတွေကကျတော့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကွင်းပြင်လိုနေရာတွေ ရှိမှ အသက်ရှင်နိုင်ပါတဲ့။ ဝံပျင်းတွေ ရဲ့ အမွှေးတွေကတော့ အမြဲ လိုလို ဘယ်တော့မှ မဖြီး မသင်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရှုပ်ပွနေတတ်ပါသတဲ့။ ဝက်ဝံ ကကော ဘယ်လို ဝံ အမျိုးအစားမှာ ပါမှာပါ လိမ့်? လွတ်လပ်မှု ကို ကြိုက်တဲ့ ဝံညိုလား? ငြိမ်းချမ်းမှု ကို ကြိုက်တဲ့ လူနဲ့ နီးနီးနေတတ်ကြတဲ့ အေရှီယတစ် ဝံ မျိုး လား? ဒါမှမဟုတ် အမြဲ လိုလို အတန်းတက်တိုင်း ပျင်းနေတတ်တဲ့ ဝံပျင်းမျိုးလား?
Posted on April 19, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်Leaveacomment on ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၁၂)
Posted on April 19, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး5 Comments on ကျမ ချစ်မိ အလုပ်ရှုပ်သည်
By Addy Chen in ဂျူး – Ju Fans · Edit Doc · Delete
လောလောဆယ် ကျတော့မှာ ရှိတဲ့ ဆရာမ စာအုပ်တွေကို စာရင်းလုပ်ထားတာ တင်လိုက်တယ် မသိလိုက်တာ မရှိလိုက်တာ မရှိရလေအောင် ဖြည့်ပေးကြပါအုံး နောက် မအမမက ကအကြံပေးတာက စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့ နှစ်အလိုက်တင်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်တဲ့ ကျတော့မှာ အဲ့တာတော့ မရှိဘူး ဝယ်ထားတဲ့ တချို့စာအုပ်တွေက ပြန်ထုတ်တာတွေဆိုတော့။ နောက်ပြီးတော့ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ်တွေထဲမှာ မပါသေးတဲ့ ဝတ္ထုတို စာရင်းရှိသေးတယ် သန်းခေါင်ယံနာရီစက်များ၊ သတ္တမမြောက်ငါး စတာတွေ အဲ့တာတွေ လစ်သပ်သပ်လုပ်မယ် ဆောင်းပါးများ
ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်များ 1. ရေမျောသီး 2. ဆရာဝန်တယောက်၏ မှတ်စုများ 3. အရောင်များနှင့် ကစားခြင်း 4. အချစ်ဆိုတာ ကြိုးနဲ့ သီဖို့ မလိုတဲ့ ပန်းတွေ 5. ကျမချစ်သော ယောက်ျားများ 6. ကောင်းကင်မပါတဲ့ ည 7. ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့ 8. ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ ဝတ္ထုတိုများ (အခြား)
Like · Unfollow Post · May 16, 2011 at 6:54am
March 24, 2011 at 9:41am · Like
March 24, 2011 at 9:43am · Like
March 24, 2011 at 9:45am · Like
March 24, 2011 at 9:49am · Like
March 24, 2011 at 9:50am · Like
March 24, 2011 at 9:51am · Like
March 24, 2011 at 9:52am · Like
March 24, 2011 at 10:03am · Like
March 24, 2011 at 10:17am · Like
March 24, 2011 at 10:35am · Like
Nyanthar Zaw တခြားသူတွေ တခြားရောက်နေတာ နေမှာပေါ့ဗျ 😛
March 26, 2011 at 7:56pm · Like
March 28, 2011 at 10:54am · Like
March 28, 2011 at 10:57am · Like
March 28, 2011 at 10:59am · Like
March 28, 2011 at 11:00am · Like · 1
March 28, 2011 at 11:47pm · Like
March 28, 2011 at 11:54pm · Like
Nyanthar Zaw ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို နောက်နေ့ ရိုက်တင်ပေးမယ် တိုက်ကြည့်လိုက်ကြပေါ့နော် 😛
March 28, 2011 at 11:56pm · Like
Posted on April 17, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, စာအုပ်စင်2 Comments on ဂျူး စာအုပ်စာရင်း
ဒီလိုနဲ့ ကျိရိ တယောက်ဖျားလိုက်တာ ၄-၅ ရက်လောက်ကြာသွားတယ်။ သင်္ချာ စာမေးပွဲ စစ်မယ့်ရက်တောင်
ကျောင်းလာမတက်နိုင်ဘူး။ ကျမ သူ့ကို အားကျလိုက်တာ။ ကျောင်းမှာက ကျိရိကလွဲရင် ကျမမှာ တရင်းတနှီးပေါင်း နိုင်တဲ့သူ က မရှိသလောက်ပဲ။ သူမလည်း မရှိရော ကျမလဲ နေ့လည်စာထွက်စားဖို့တောင် ပျင်းလာရော။ အဲ့ဒီနေ့က
နေ့လည် ထမင်းစားလွှတ်ချိန်ကျတော့ ကျမ တဘက်က ဝက်သားချဉ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်စားနေပြီးတော့ တဘက် က ညနေကျရင် စစ်မယ့် သင်္ချာဘာသာရပ်အတွက် စာပြန်နွှေးရင်း လေ့ကျင့်နေမိတယ်။
ကျမ ခေါင်းကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ညှပ်ပြီးတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ဂျီသြမေထရီသင်ခန်းစာတွေကို ကြည့်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာပဲ နောက်ဘက်ကနေ တယောက်ယောက်က ကျမ ကျောကုန်းကို လက်ညိုးနဲ့ လာကုတ်နေတယ်။
လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဝက်ဝံ။ ကြည့်ရတာ ခုနက ခုန်တန်းပေါ်မှာ မှောက်ရက်အိပ်နေရာကနေ ခုမှ နိုးလာသလိုပုံ နဲ့ ကျမ လက်ထဲက အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့….
“ငါ့မှာ အပိုတခုရှိသေးတယ်။” ကျမ သူ့ကို နောက်ထပ် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်အပိုတခုပေးလိုက်ပါတယ်။ အစက ကျမ ညနေပိုင်းခဏ နားချိန်ကျရင် စားမလို့ချန်ထားတာ။
“ကျေးဇူးပါပဲဟာ” လို့သူပြောပြီး အားနာပါးနာပုံနဲ့ စားနေလိုက်တာ ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ပါးစပ်တဝိုက်မှာလဲ ပေါင်မုန့်
“ဒီတပုဒ်နင်တွက်တတ်လား?” ကျမ လက်ထဲက သင်္ချာစာအုပ် ကိုယူပြီးတော့ ပုစ္ဆာကို သူ့ကိုဘတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပျံမောင်းသမားတယောက်ဟာ တောင်ဘက်စူးစူးကို ကီလို ၁၀၀ ပျံပြီးတော့ အရှေ့ဘက်ကို ကီလို ၁၀၀ ထပ်ပျံပါတယ်။ ပြီးတော့ မြောက်ဘက်စူးကို ကီလို ၁၀၀ ထပ်ပျံပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ မူလစပျံတဲ့နေရာကိုပြန်
ရောက်နေတာတွေ့ရပါသတဲ့။ သူဘယ်နေရာကနေ စပျံတာပါလဲ?။
“မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း” ဝက်ဝံက စဉ်းတောင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ တန်းဖြေပါတယ်။
“ဘာလို့လဲ?” ကျမ နားမလည်ဘဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်။
ဝက်ဝံက လက်ထဲက ပေါင်မုန့်ကို ကိုက်ထားပြီးတော့ စာကြည့်စားပွဲရဲ့ အံဆွဲထဲကနေ ကြေတွန့်နေတဲ့ စာရွက် တခုရှာထုတ်လာပြီး အပေါ်မှာ ပုံတပုံ ကျမကိုဆွဲပြပါတယ်။
“ဒါက လှည့်ထားတဲ့ ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းတခုပဲ။ ကမ္ဘာက ဘဲဥ ပုံသဏ္ဍာန် ပတ်လမ်းနဲ့ သူ့ဝင်ရိုးပေါ်ကနေလည်နေ တာကိုး။ ပြီးတော့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဆိုတာက ကမ္ဘာ ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှာရှိတာလေ။ သူ့ကို ဗဟိုထားပြီး ပျံတဲ့ အခါ ဘယ်ဘက်ကိုပဲ ပျံပျံ နောက်ဆုံးတော့ မူလနေရာကို ပြန်ရောက်မှာပဲလေ။”
ကျမ သူဆွဲတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ နားလည်သလိုလို မလည်သလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။
“နောက်ထပ် စပျံလို့ရတဲ့ နေရာ နှစ်နေရာရှိသေးတယ်” သူက ပေါင်မုန့်ကို တဖဲ့ထပ်ကိုက်လိုက်ပြီးပြောပါတယ်။
“နေပါစေတော့ဟာ” သူက ခေါင်းကို တချက်ကုတ်ပြီးပြောပါတယ်။ “လူပုလေးက ဒီမေးခွန်းကိုမေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်ပြီး ကမ္ဘာ့ ဝင်ရိုးတို့၊ အီကွေတာတို့၊ လတ္တီကျူတို့ နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ နင့်ကိုပြောပြလို့ရှိရင်လဲ နင်နားလည်မှာမှ မဟုတ်တာ။”
“ငါနားမလည်ဘူးလို့ နင်ဘယ်လိုသိလဲ?” ကျမ မကျေမနပ်နဲ့ပြန်ဘုတောလိုက်ပါတယ်။
“နင်အခု အလွယ်ဆုံး ပထမမေးခွန်ူကိုတောင် မဖြေနိုင်ဘဲနဲ့” သူက အပျင်းကျောတချက်ဆန့်ရင်းပြောပါတယ်။
ကျမ နှုတ်ခမ်းတချက်ကိုက်ပြီး သူ့ကို မျက်စောင်းတချက်ထိုးပစ်လိုက်တယ်။
“ပေါင်မုန့်က ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ?” သူ ကျမ ကို ရုတ်တရက် မေးလာပါတယ်။
“ဘယ်လောက်လဲဆို” သူက ဇွတ်ဆက်မေးနေပါတယ်။
ကျမ လက် ၃ ချောင်းကို ထောင်ပြလိုက်တယ်။ သူက သူ့အိပ်ကပ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံ ၃ ကျပ် ရှာပြီး ကျမကိုပေးပါ တယ်။ ပြီးတော့ မျက်လုံးတလက်လက်နဲ့ ..
“အရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲ။ မနက်ဖြန်ကော ငါ့ကို တခုလောက်ဝယ်လာပေးနိုင်မလား?”
ကျမ သူ့ကို ကြောင်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ဒီဝက်ဝံတကောင်ဟာ စိတ်ပဲဆိုးရမလား ရယ်ပဲ ရယ်ပြစ်လိုက်ရတော့ မလားကို မသိတော့ပါဘူး။
“ခဏနေ သင်္ချာစစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ နင်ငါ့ဆီက အဖြေကို ကူးပေါ့ဟာ” သူက ခေါင်းကိုခုံနောက်မီပြီးတော့အပျင်း
“ဘုရား ဘုရား မလုပ်ပါနဲ့” ကျမ အလန့်တကြား သူ့ကို တားမိတယ်။ “လူပုလေးက ဖမ်းတဲ့နေရာမှာကာ အပြစ်ပေး
တဲ့နေရာကော နာမည်ကြီးဟ တော်ကြာ မိသွားမှဖြင့် နင့် နောက်ထပ်တခါ ကျောင်းထုတ်ခံနေရပါအုံးမယ်”။
သူတချက် တည်ကနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျမ က သူအရင်ကျောင်းကနေ အထုတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ဘယ်လိုသိ
နေလဲလို့ တွေးနေပုံပါပဲ။ ကျမလဲ ချက်ချင်းလိုလို ခေါင်းကို ခုံရှေ့ ပြန်လှည့်ပြီးတော့ စာဆက်ကြည့်နေသလို ဟန်
ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ပါးစပ်က ဖွင့်မပြောပေမယ့် ကျမ စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်သလိုလို ခံစားရပါ
ညနေပိုင်း သင်္ချာစစ်တော့ ဝက်ဝံပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ခုနက လေယာဉ်မောင်းသမား ပုစ္ဆာ ပါကိုမလာပါဘူး။ မေး
ခွန်း ခြောက်ပုဒ်ထဲမှာ ကျမ သေသေချာချာဖြေနိုင်တာဆိုလို့ နှစ်ပုဒ်ပဲပါတယ်။ ကျန်တာတွေ အကုန်လုံးလိုလို စိတ် ထဲထင်ရာ လျောက်ဖြေလိုက်တာပါပဲ။ ဝက်ဝံ က သူ့အဖြေလွှာကို အရှေ့ဘက် လက်ဆင့်ကမ်းလာတော့ သူ့အဖြေ လွှာကို ခိုး မကူးမိဖို့ ကျမ တော်တော်စိတ်ထိန်းရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ စာစစ်တဲ့ အချိန်ပြီးသွားတော့ လူပုလေးက ရုတ်တရက် ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်ပြီးတော့
အေးစက်စက် လေသံနဲ့ …..
“ဝန်မိုးညို နဲ့ ကျန့် ဂျင်းနီ မင်းတို့နှစ်ယောက် အတန်းရှေ့ကို ထွက်လာခဲ့စမ်း”
ဘုရားရေ ကျမ ဝက်ဝံ ရဲ့ အဖြေလွှာကို တချက်လေးပဲ မျက်လုံးဝေ့ကြည့်မိတာပါ။ အဲ့တာတောင် လူပုလေးက သိနေသလား? ကျမ ထိုင်ခုံကနေ မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ မရွံတရွံနဲ့ အတန်းရှေ့ ကိုထွက်လာပါတယ်။ ဝက်ဝံက ကျမနောက်ကနေ ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်လို့ပေါ့။
“ကဲ ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ ရှင်းကြစမ်းပါအုံး? နင်တို့နှစ်ယောက်ထဲက ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ?” လူပုလေးက လက်ထဲက ကျောင်း သားဂျာနယ်တအုပ်ကို ယူပြီး ပထမ တမျက်နှာ ကိုလှန်လိုက်ပါတယ်။ အတန်းသားအားလုံးဘက်ကို မျက်နှာမူ ထောင်ပြပြီးတော့ မေးလာပါတယ်။ အဲ့တာ ဝက်ဝံရဲ့ ဂျာနယ်ပဲ။ စာမျက်နှာ
ပေါ်မှာ သူ့ပုံ ကပ်ထားတယ်…..နေအုံး……အဲ့တာ ဝက်ဝံ ပုံမဟုတ်ဘူး။ ဝက်ဝံက သူ့ပုံက မျက်နှာကို ညှပ်ပြီး တခြား လူတယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံပေါ်မှာကပ်ပြီး သူ့ပုံလုပ်ထားတာပဲ။ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ထားတဲ့လက်ရာက ညံ့လိုက်တာ။ သူ့ ဆံပင်တွေကတောင် ထောင်နေသေးတယ်။
လူပုလေးက ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို ခပ်စူးစူးတချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝက်ဝံရဲ့ ခေါင်းကို ဓါတ်ပုံ
ပေါ်ကနေ ခွာချလိုက်တယ်။ ဘုရားရေ…. အောက်ကပုံက ကျမပုံဖြစ်နေတာကိုး။ လက်စသတ်တော့ ဝက်ဝံ ကျမ ပုံ ကို တနေ့က ယူသွားတာ ဒီလိုသုံးဖို့ပါလား။ ဟိုတနေ့က လူပုလေးက ကျောင်းသားတွေကို ဂျာနယ်တွေထပ်ခိုင်း
တော့ သူက ဓါတ်ပုံပါမလာဘူးလေ။ အဲ့တော့ ကြမ်းပေါ်မှာ ကျမ ဓါတ်ပုံကျနေတာတွေ့တော့ တင်္ခနုပ္ဗတ္တိဥာဏ် စူးရောက်ပြီးတော့ သူ့အရင်ပုံဟောင်းတခုခုက ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီး ကျမ ခေါင်းပေါ်မှာ ထပ်ကပ်လိုက်တာပါ။ ကျောင်း ဝတ်စုံရဲ့အထက်ပိုင်းကလဲ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန် အတူတူ ရှပ်အဖြူပဲဝတ်ရတာလေ အောက်ပိုင်းက မှကွာတာဆိုတော့။ သူမို့လို့ စဉ်းစားနိုင်လွန်းတယ်။
“မင်းရဲ့ဓါတ်ပုံရော?” လူပုလေးက ဝက်ဝံကိုမေးပါတယ်။
“မရိုက်ရသေးပါဘူး” ဝက်ဝံတယောက် ရွံတွံ့တွံ့နဲ့ဖြေပါတယ်။
“အဲ့တာနဲ့ပဲ တွေပကရာပုံတပုံရှာပြီး ကျန့် ဂျင်းနီ ပုံမှာ ကပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ နှစ်ယောက်စလုံးကလဲ အပေါ် ပိုင်းတူနေတာကိုး။ ဒါကဘာလဲ……လူ့အရေခွံ မျက်နှဖုံးလား စက္ကူကပ်ထားတဲ့ မျက်နှာလား? နင်တို့နှစ်ယောက်
တော်တော်လှောင်တတ်ပြောင်တတ်နေတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား?” လူပုလေးက ရယ်သလိုလိုလုပ်ပြောနေပေမယ့် မျက်နှာပေါ်က အပြုံးက ပြောနေတာကတော့……“ငါတကယ်ရယ်ရတယ်လို့ပြောနေတယ်ထင်နေလား ငါရွဲ့ပြော
နေတယ်ဆိုတာ နင်တို့ နားမလည်ဘူးလား” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ်မျိုးနဲ့ပါ။
အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေက လူပုလေး ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရော ကျွက်စီကျွက်စီနဲ့ ကိုယ်လုံးတွေ လှုပ်ခတ် ကုန်တဲ့ အထိ ရယ်ကုန်ကြပါတယ်။ အဆူခံနေရတဲ့ ကျမကိုယ်တိုင်တောင် မနေနိုင်ပဲ ခိုးရယ်မိပါသေးတယ်။
“နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး ဒီနေ့ကျောင်းဆင်းရင် စာကြည့်တိုက်မှာ အချိန်ပို တနာရီစီနေပြီး စာကြည့်ရမယ်”။
လူပုလေးက ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဲ့လိုပြောပြီးမှ အတန်းကိုဖြုတ်ပြီး ထွက်သွားပါတယ်။
ဝက်ဝံ က ကျမ ကိုမော့ကြည့်တယ်။ သူ့အကြည့်တွေက တောင်းပန်နေသလိုလို။
Posted on April 14, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်5 Comments on ငါ မင်းကို မိုးတိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ် (အခန်း-က-၁၁)
သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ တီချမ်း သူငယ်ချင်းဆိုတော့ ဂေးပေါ့။ ဘန်ကောက်မှာပဲနေတာ။ အိမ်နားမှာပဲ။ အိမ်ချင်းနီးတော့ အမြဲ ဝင်ထွက်သွားလာ၊ တီ့အိမ်ကလဲ သူ့အတွက် စားအိမ်သောက်အိမ်ပဲပေါ့။ ခုတလောတော့ ပေါ်မလာတော်မူပြန်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ စမ်းစစ်ကြည့်တော့ လားလား ခုတလောမှာမှ ချစ်သူ အသစ်စက်စက်လေး တယောက်ရနေတယ်ဆိုတာကိုး။ ကဲ ဘာ့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ်မလာ အတော်ကြာတော့လဲ ဖုန်းဆက်ရပါတယ်။ အဲ့တော့မှ နောက်တနေ့မှာ ပေါ်လာတော်မူတယ်။ ည (အဲ မနက်ဖြစ်နေပြီ) ၃ နာရီခွဲ ရောက်
ရောက်ချင်းပဲ သူ့ချစ်သူက သူ့ကို ဘယ်လို မနက်မှာ ဖုန်းနဲ့ အိပ်ရာနိူးတဲ့အကြောင်း၊ ညနေကျတော့ အလုပ်မှာ လာကြိုပြီးသကာလ ဒင်နာကျွေးတဲ့အကြောင်း၊ မနေ့က ညကတော့ အသစ်တဖန်ပြန်တင်တဲ့ တိုက်တင်းနစ် 4DX နဲ့ သွားကြည့်တာ ရေတွေဖြန်း၊ အအေးတွေပိုတဲ့ အတွက် သူ့ကို ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ပွေ့ဖက် အကြင်နာစွေတဲ့အကြောင်း။ မင်းသားလေး ဂျက်ကို သနားလို့ ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေအတွက် ဘေးကနေ ဖေးမ တစ်ရှုးတို့ပေးတဲ့ အကြောင်း ဟုတ်တာတွေရော မမှန်တာတွေရော ရောသမမွေပြီးသကာက “အကြွားမ” က လေ တွေ ပစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တီက မယုံဘူးပြောလို့ ရုပ်ရှင်လက်မှတ် ဘတ် ၅၀၀ တန် (၁၅ ဒေါ်လာ)ကိုလဲ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ မရမက ရှာဖွေ ထုတ်ပြီးသကာလ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အကောင်က သူ့အတွက် အကုန်ခံတဲ့ အကြောင်း သက်သေတည်ပါသေးတယ်။ နောက်သူငယ်ချင်းတယောက်လဲ ရှိပါသေးတယ်။ ချစ်သူများ
နေ့မှာ ပန်းတွေ ဝယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပို့ခိုင်းတာမျိုး၊ ထားတော့……..အပိုတွေလဲပါမယ်။ တကယ်လဲဖြစ်မယ်၊ မမှန်တာတွေလဲ အများကြီးပါနိုင်တယ် သို့သော် ကိုယ့်အတွက်တော့ ပိုစ့်တခုရဖို့ အတွေးတစ လာပေးတယ်။
ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက်ရဲ့ ရီလေးရှင်းရှစ်ပ် ကို ဆန်းစစ်ချင်ရင် သူတို့ အပြင်ထွက် စားသောက်ကြတဲ့အခါ
ငွေရှင်းတဲ့ အခြေအနေ နဲ့ စိတ်သဘောထားတို့ကိုကြည့်ပြီး သုံးသပ်ရမယ်။
ယောက်ျားတယောက်က စားကြသောက်ကြပြီးစီးလို့ ပိုက်ဆံရှင်းကြတဲ့အခါ ဘေလ် ကိုဘယ်လောက်ကျတယ် ဆိုတာ လုံးဝလုံးဝ မကြည့်ပဲ ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါပေါ့ အဲ့တာတင်မက ဝိတ်တာကိုပါ တစ်ပ် များများပေးလိုက်သေး တယ်ဆိုရင် သေချာတယ် ဗေဒင်မမေးနဲ့ တီချမ်းကိုမေး။ ဒင်း အဲ့ဒီ မိန်းမကို ခုမှ စပိုးနေတုံးပဲ။
တကယ်လို့သာ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ ဘေလ် ကိုသေချာ ဘယ်လောက်ကျသလဲ ကြည့်နေပြီဆိုရင် ကောင်မလေးက အဖြေပြန်ပေးပြီးနေပြီလို့မှတ်။
နောက်ပြီး သူက ဘေလ် ကို သေချာကြည့်တာတင်မကတော့ဘူး ဆိုင်က တွက်တာ မှန်ရဲ့လား မှားများမှားနေမလား ဆိုတာကိုပါ စိတ်မှန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် တွက်ကြည့်နေပြီ ဆိုရင် သူနဲ့ အဲ့ဒီမိန်းမ ရဲ့အခြေအနေက အားနာစရာမလိုလောက်အောင် တယောက်နဲ့တယောက် သိနားလည် နေပြီဖြစ်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီပေါ့။ (စကားမစပ် ကြားညှပ်ပြောရရင်တော့ ရန်ကုန် ဟံသာဝတီက ရွှေလီ တချိန်လုံး အမြဲလိုလို ဘေလ်မှားတယ် တမင်များ မှားသလားထင်ရအောင် မှားတယ် အဲ့ဆိုင်သွားစားလို့ကတော့ အခုမှ စလိုက်လိုက် ယူပြီးပြီး သေချာ သာစစ် ကက်ကူလေတာပါရင် ထုတ်သာပေါင်းပစ် တကယ်) ကဲ စကားတွေက ကားကုန်ပြန်ပြီ။
အင်းနောက်တခုက ယောက်ျားက ဘေလ်ကို မျက်စိတဝေ့ပဲကြည့်တယ် ပြီးတော့ အမျိုးသမီးကို ရှင်းခိုင်းလိုက် တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ် အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးက သူ့မိန်းမ၊အိမ်သူ အဆင့်ရောက်နေပြီပဲ။ “စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ ကန်သင်း” မှလား။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုင်ခွင့်ရနေပြီလေ။ (မှတ်ချက် ကပ်စေးမနည်းသော ယောက်ျား အများစု ကိုသာ ဆိုလိုတယ်)။ မိန်းမက ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာပြတယ်လေနော်။
ကဲ ယောက်ျားတွေကို ပြောပြီးတော့ မိန်းမတွေဘက်လှည့်ရအောင်။
မိန်းကလေးတယောက်က ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့အခါ သူအားမနာတမ်းမှာထားတဲ့ ဘေလ် ဘယ်လောက်ကျသလဲဆိုတာ မကြည့်ပဲနဲ့ ရှင်းတဲ့ အခါ သူနဲ့ တူတူလာတဲ့ ယောက်ျားက တစ်ပ် ဘယ်လောက်ပေးသလဲဆိုတာ ကိုပဲ အလေးပေး
လေ့လာနေတယ်ဆိုရင် သေချာတယ် သူ အခုမှ အဲ့လူနဲ့ စတွဲသွားတွဲလာလုပ်တာ။ လေ့လာနေဆဲ အခြေအနေ။
အင်း ဘေလ်ပေါ်က ဘယ်လောက်ကျတယ်ဆိုတာကိုလဲ သေသေချာချာ ကြည့်နေပြီ၊ ယောက်ျားကိုလဲ တစ်ပ် အများကြီးမပေးနဲ့ သူတို့က ဝန်ဆောင်မှုခ ၁၀ % တောင်ယူထားတာ ဘာညာ တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုးနေပြီဆိုရင်
သေချာတယ် ဒီမိန်းမ အဲ့ဒီ သကောင့်သားကို ချစ်နေပါပြီ။ မလိုတာ မကုန်စေချင်တော့ဘူးလေ။ ဒါတွေက အပိုမကုန်ရင် ကိုယ့်လက်ဝတ်လက်စားခတွေဖြစ်မှာ မှလား။ မလိုတာချွေတာရမယ်။
တကယ်လိုများ ယောက်ျားက ဘေလ်ရှင်းတာကို မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲနဲ့ သေချာကြည့်နေတာတို့၊ တစ်ပ်ပေးတာ နည်းတယ် ဘာညာ ဘာညာ ဆူပူဆောင့်အောင်နေပြီဆိုရင် သေချာတယ် သူအဲ့ကောင် ကိုမချစ်တော့ဘူး။ သို့မဟုတ် ဒင်းတော့ ချစ်ပါတယ် ဆို တဲ့ အဖြေကို မမျှော်လင့်နဲ့တော့။ ပြန်ပေတော့ မစဉ်းစားနဲ့ဘဲ။
အင်း တကယ်လို့များ မိန်းမက ဘေလ် ကို သေသေချာချာ တိတိကျကျ စစ်နေပြီ။ ယောက်ျားကိုလဲ တစ်ပ် အများကြီး မပေးနဲ့ ဘာညာ ပြောနေပြီဆိုရင်တော့ သေချာတယ် အဲ့တာ အိမ်ထောင်ရှင်မပဲ။
ကဲ မေးစရာတခုပဲ ကျန်တော့တယ် အဲ့တာကတော့ တီချမ်းတယောက် ဘာအထောက်အထားနဲ့ ဒီလိုပြောနိုင်တာ လဲ သူက ဘာမို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိတယ်ဆိုပါတော့ (အမှန်တော့ တီချမ်းလို ပညာရှင်မ ကို ဒီလို သံသယဝင်ရဲ တာ တကယ်တွေးကြည့်ရင် ကြောက်စရာကြီးနော် သူက သူ့ဆယ့်နှစ်ကြိုးထဲက တကြိုးကြိုးနဲ့ ပစ်လိုက်မှ ကွိနေမယ်)။ ဒီစာတွေ ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ တီ့ ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှု၊ အခွေတွေ ရုပ်ရှင်တွေ တီဘတ်တဲ့ စာအုပ်တွေက ရလာတဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗဟုသုတ ကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချတာပါ။
နောက်ပြီးတော့ မိန်းမတွေ ငွေရှင်းမယ့် အချိန်က တကယ်တော့ ၄ ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့…..
သူက အတူတူလာတဲ့ သူရဲ့ ယူထားတဲ့ မိန်းမမို့လို့။ ရှုပ်သွားလား အတူတူလာတဲ့ နှစ်ယောက်က လင်မယားလို့ ပြောတာ။ သူ့ပိုက်ဆံလဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံလေနော်။
ယောက်ျားဆီက လတ်လတ်လောလောမှ ကျောက်မျက်ရတနာလိုမျိုး ရွှေ စိန်လိုမျိုး လက်ဝတ်ရတနာ တခုခု လက်ဆောင်အဖြစ်ရထားလို့ ပြန်လည် မျက်နာလုပ်တာ သော်လည်းကောင်း၊ ထောင်ရ လို့ ရာပြန်စွန့် တာသော်လည်းကောင်း၊ သူကချည်းပဲ ယူနေတယ်ဆိုတဲ့ အပြစ်ရှိသလိုခံစားချက် (guilt) မဖြစ်ချင်လို့ သော် လည်းကောင်း၊တခုမဟုတ်တခုဖြစ် ရမယ်။ အဲ့တာတောင် အများစုက သူတို့ ယောက်ျားရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ပဲရှင်းတာပါပဲ။ (whatafree loader, kidding) seriously???
နောက်တခုကတော့ ပိုဆိုးတယ်။ အကောင် (ယောက်ျားက) ရည်းစားဟောင်းမို့လို့ ငွေလုရှင်းတဲ့ နည်းနဲ့ သူအခု ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု နဲ့ ဒင်းထက်ပိုသာနေတယ်၊ နင်မရှိလဲဖြစ်တယ်၊ ငါပိုအောင်မြင်နေတယ် တွေ့လား ဆိုတာကို ပြချင်စိတ်နဲ့ လဲ ရှင်းတတ်ပါသေးတယ်။
ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့ အချိန်မှာ မိန်းမက လုရှင်းတာဆိုလို့ကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ဒီအကောင် ဆက်လိုက်ဖို့ကို မကြိုးစားနဲ့တော့။ နင် ဘယ်လောက်ရှာနိုင်လို့ ငါအမြဲစားတာ ရှင်းနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အချိုးပေါ့။
ကဲ ဒီလိုဆို ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတွေ နဲ့ ပြန်ချိန်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ တီချမ်းပြောတာ ဘယ်လောက်မှန်လဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
မှတ်ချက်။ကိုယ့်ကိုကိုယ်မညာကြေး။ ညာလဲ တီချမ်းက သိမှာပဲ။ သူက အရမ်းပညာရှိတယ်တဲ့။ ပြောကြတယ်။
A Chen7:44 AMSaturday
14th Apr 2012Home
Posted on April 13, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး10 Comments on ငွေရှင်းမယ့် အချစ်